पिंगुले न्याय कहिले पाउने ? |
पिंगुले न्याय कहिले पाउने ?
हत्यारा खोज्न प्रहरीले चासो दिएन : पीडित
प्रकाशित मिति :2016-09-30 11:33:22
न्यायको पर्खाईमा मृतक शिवरानीका वृद्ध हजुरवुवा पिंगु थारु ।
कपिलवस्तु । आजकै दिन अर्थात् असोज १४ गते साँझको समय थियो । शिवरानी थारुले घर नजिकै भएको सांस्कृतिक कार्यक्रम हेरेर आइहाल्छु भनेको अझै पनि भरखरै जस्तो लाग्छ उनका हजुरवुवा पिंगु थारुलाई । तर नातिनी शिवरानी त्यो साँझ फर्केर आइनन् । बरु उनको लाश भेटियो । नातिनीको झल्झली यादले पींगुलाई छोडेको छैन अझै न्याय नपाउँदा पीडैपीडामा उनी छट्पटिएका छन् ।
हत्या भएको पाँचवर्ष वितिसक्दा पनि प्रहरीले हत्यारा पत्ता नलागेको भनेपछि मृतक शिवरानीको परिवारमा निरासा छाएको छ । कपिलवस्तुको वाणगंगा १२ बैदालीकि शिवरानी थारुको २०६८ साल असोज १३ गते गाउँ मै साँस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न गएकी शिवरानी १४ गते नजिकैको नहरमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिंगेका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक शिशु शर्मा र पोष्ट मार्टम रिर्पोटले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेतापनि अहिलेसम्म प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएकै छैन । उनको न्यायका बारेमा सन्चार माध्यम, स्थानिय महिला समूह, बुद्धिजिवीहरूले पटक पटक आवाज उठाए पनि सुनुवाई नभएको कोपवाकी महिला अधिकारकर्मी रीता पाण्डे बताउँछिन् ।
हत्यारा नजिकैको भएको र प्रहरीले इमान्दारिताका अनुसन्धान गर्ने हो भने पत्ता लगाउन गाह्रो नपर्ने स्थानिय बुद्धिजिवी चिरन्जिवी गिरी को भनाई छ ।
प्रहरीको सक्रियता नभएकै कारण हत्यारा पत्ता लाग्न ढिलाई भएको गिरीले बताए । प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन भएका कारण र यस घटनाका विषयमा गम्भीर नहुँदा हत्यारा खुलेआम घुमिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । हत्यारा पत्ता नलाग्दा आफूहरूले न्याय नपाएको गुनासो स्थानिय संचारकर्मीसँग मृतकका हजुरबुबा पिंगु थारुले दुखेसो पोखे ।
वाणगंगा नगरपालिका भावपुरकी २७ वर्षीया गंगा पौडेलको हत्या भएको दुईवर्ष वितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्ने सुईको समेत छैन् । २०७१ साउन दुईगते तीजको कपडा सिलाउन भनी गजेहडा बजार पुगेर फर्किंदा घर नजिकैको जंगलमा हत्या भएको थियो । जगंलमा उनी निर्वस्त्र मृत आस्थामा फेला परेकी थिइन् । उनको पनि बलत्कारपछि हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको भएपनि प्रहरीले पोष्टमार्टम रिपोर्ट समेत नदिएको पीडितको भनाई छ । प्रहरीले घट्ना प्रति आलटाल गर्दै घर परिवारमै आरोप लगाउँदै उम्कन खोजेको गुनासो मृतकका ससुरा सशीधर पौडेलले गरे । कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुख विष्णु कुमार के.सी ले यी दुवै जघन्य अपराधको अनुसन्धान द्रुत गतिमा भएको दावी गरेका छन् । दुवै घट्नामा प्रहरी सुस्ताएको र अपराधीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन नचाहेको स्थानिय र मृतकका घरपरिवारका सदस्यहरूको गुनासो छ् ।
प्रहरी प्रमुख भएर के.सी आए लगत्तै पत्रकार सम्मेलनमा र विभिन्न अवसरमा पत्रकारले समेत पटक पटक जिज्ञाशा राख्दा समेत अपराधी पत्ता लगाउने र कार्वाही गर्ने तर्फ कुनै काम गरेको नपाएको स्थानीय पत्रकारहरू बताउँछन् । घट्नाका बारेमा नागरिक समाजका अध्यक्ष दोलख बहादुर पछाईले पनि दोषी पत्ता नलाग्नुको कमजोरी प्रहरी रहेको बताउँदै प्रहरीले अन्य हत्याका अपराधीको अनुसन्धानमा समेत ढिला सुस्ती गरेको आरोप लगाए ।